Rebooting vs Stop/Start of Amazon EC2 Instance - Chum's Solution Myanmar Post
Rebooting vs Stop/Start of Amazon EC2 Instance
AWS account တစ်ခု create လုပ်ပြီးရင် EC2 တွေဆောက်မယ် ကိုယ့်ရဲ့ app တွေ run မယ်ပေါ့ ။ ဒီနေရာမှာ အရင် ပိုစ့် တုန်းက EC2 instance type တွေ change တုန်းက အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက Instance ကို stop လုပ်လို့ DNS link / EIP အစရှိသဖြင့် changes ဖြစ်သွားခြင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ user တို့ သိထားသင့်တဲ့ EC2 instance type ကို Stop / Start / Reboot / Terminate ဆိုတဲ့ action4မျိုးရှိပါတဲ့ အထဲကမှ Terminate ဆိုတဲ့ action ကတော့ user တို့ ရဲ့ create လုပ်ခဲ့ တဲ့ instance ကို အသုံးမလိုတော့ရင် terminate လုပ်ခြင်းဖြင့် instance ကို delete လုပ်လိုက်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ် (မလိုအပ်ပဲ ငွေကြေးကုန်ကျခြင်းမှ တားဆီးပေးပါတယ်)။ user တို့ကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေမဲ့ အရာကတော့ Stop နဲ့ Reboot ဆိုတဲ့ အရာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Stop လုပ်ခဲ့တဲ့ instance ကို Start ပြန်လုပ်နိုင်သလို Reboot ဆိုတဲ့ အရာကလဲ ကလဲ ထိုနည်းတူစွာဘဲ ဆိုပေမဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေကွဲပြားတာလဲ?
ဥပမာ မိမိ computer ကို reboot လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ ဒါဟာ သာမန်အတိုင်း system ကို shutting down လုပ်ပြီး backup အနေနဲ့ boot ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့။
Amazon EC2 ကတော့ instance ကို rebooting လုပ်ရင်ဖြင့် ခုနက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ computer ကို reboot လုပ်တဲ့ process way က အတူတူပါဘဲ။Instance တစ်ခုလုံးကို restart လုပ်ပြီး boot လုပ်တဲ့ အတွက် instance မှာ changes ဖြစ်တာမျိုးမရှိပါဘူး ။ဒါကတော့ reboot ပိုင်းပေါ့။
Stop/Start process တွေကျတော့ reboot process နဲ့ လုံးဝကို ကွဲပြားသွားပါပြီ။ instance ကို Stop/Start လုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ cause effect တွေသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
EC2 instance ရဲ့ storage ဖြစ်တဲ့ EBS volume ပေါ်မှာ server တွေ run ထားမယ်ပေါ့။ အဲ့ server တွေ running လုပ်နေတဲ့ instance ကို stop လုပ်လိုက်ရင် user တို့ ရဲ့ EBS volume မှာတော့ storage ကတော့ ရှိနေပေမဲ့ သူရဲ့ instance id ရဲ့ virtual server ဟာဆိုရင် running မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Instance ကို ပြန်ပြီး စတင်ဖို့ Start လုပ်တဲ့အခါ အရင်ကရှိတဲ့ EBS volume ကိုထပ်ပြီး boot up လုပ်ပြီး running လုပ်မှာပါ ။ Stop လုပ်ထားတဲ့ instance ကို Start ပြန်လုပ်မယ်ဆို ဘယ်အရာတွေ ပြောင်းလဲသွားမလဲ ?
EC2 မှာ random IP address အသစ်တစ်ခု ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( Note : instances ရဲ့ VPC ကတော့ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး )
Instance ကို stop မလုပ်ခင် Elastic IP address နဲ့သာ connect လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် instance ကို start ပြန်လုပ်တဲ့ အခါမှာ ပြန်ပြီး EIP ကို connect လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ (Note : VPC instance ဟာဆိုရင် stop/start တိုင်း connect လုပ်ခဲ့တဲ့ Elastic IP addresses ကို keep လုပ်ထားပါတယ်)
အရင် instance ကို ပြန်လည်သုံးစွဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ အသစ် storage တစ်ခုအနေနဲ့သာ instance ကို run မှာဖြစ်ပါတယ်။
instance stopped လုပ်ထားချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာဆိုရင် instance သုံးစွဲမှုကို charges ပေးစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ EBS volume storage မှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ amount တွက်တော့ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
instance ကို ပြန်ပြီး start လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ billing hour နဲ့ စတင် ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ instance အသစ်တစ်ခုကို start လုပ်ပြီး ပထမ မိနစ် 60 အတွင်း stop/start လုပ်တဲ့ အကြိမ် ၃ကြိမ် ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် instance ၁ခု၏ 4hr စာ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Instance ကို ပြန်ပြီး start လုပ်ချိန်မှာ EC2 က slot နှစ်ခု ကို run ဖို့ ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနညး်ပါတယ်။ ပြန်ပြီး running လုပ်လိုက်တဲ့ instance ဟာ ယာယီပြောင်းလဲမှုများ ရှိပါတယ်။
Instance ကို Reboot လုပ်လိုက်ချိန်မှာ ပုံမှန် OS ကို reboot လုပ်လိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် instance ဟာ hardware ပိုင်းကော private/public IP address ကော ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။ EIP နဲ့ ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လဲ အရင် EIP အတိုင်းရှိနေမှာပါ။ Storage ပိုင်းလဲ ပြောင်းလဲမရှိပါဘူး။ Reboot လုပ်ပြီး Instance running ဖြစ်ရင် billing hour က stop/start လုပ်သလိုလဲ အသစ်တဖန် ပြောင်းလဲမှု မရှိနိုင်ပါ။
Instance ကို stopped လုပ်နေစဉ် မိမိရဲ့ instance ကို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုလဲ အရင် artical ရဲ့ link ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ How to change the instance type from Smaller to Higher ?
Warning: “Stopping” လုပ်ခြင်းဟာ Instance ကို “terminating” လုပ်တာနဲ့ မတူပါဘူး။EC2 instance ကို terminate လုပ်လိုက်တဲ့အခါ EC2 ထဲမှာ run ထားတဲ့ အရာတွေအပြင် EBS volumes တွေပါအကုန် delete လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလဲ ကွဲပြားစွာနားလည်သင့်ပါတယ်။
Author chumsPosted on July 31, 2018 July 31, 2018 Categories AWS Tutorial
Previous Previous post: How to change the instance type from Smaller to Higher ?
Next Next post: How to set up EC2 as LAMP system ?